အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲမတိုင်မှီ စမစ်ရို နဲ့ ရှာကာ တို့ရဲ့ ဒဏ်ရာ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာတီတာ - xyznews.co
အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲမတိုင်မှီ စမစ်ရို နဲ့ ရှာကာ တို့ရဲ့ ဒဏ်ရာ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာတီတာ
အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲအတွက် စမစ်ရို ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝ နေပြီလား ? ရှာကာ ရဲ့ ဒဏ်ရာ အခြေအနေ တိုးတက်မှု ဘယ်လောက် အထိ ရှိနေပြီလဲ ဘယ်တော့ ပြန်ကစားနိုင်မှာလဲ ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ ဟာ အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖြေကြား သွားခဲ့ပါတယ်။
ရှာကာ ဟာ ဒီရာသီ တော့တင်ဟမ် နဲ့ ပွဲမှာ ဒူးဒဏ်ရာ ရရှိသွားခဲ့ပြီး ခုချိန်အထိ အာဆင်နယ် အတွက် ကစားပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး ။ ရှာကာ ဟာ အခုအချိန်မှာ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ အပေါ့စား လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဆင်းနေပြီ ဖြစ်ပြီး ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝလာဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ။
စမစ်ရို ကတော့ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲမှာ အသေးစား ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆာကာ နဲ့ လူစားလဲ ခဲ့ရပါတယ် ။ အာတီတာ က အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲမတိုင်မှီ စမစ်ရို ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလို အသိ ပေးသွားခဲ့ပါတယ် ။
” ပွဲချိန်(မန်ယူနိုက်တက်) အတွင်းမှာ သူ(စမစ်ရို) ကစားရတာ သက်သောင့်သက်သာ သိပ်မရှိဘူးလို့ ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို လူစားလဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့အခြေအနေက ကောင်းကောင်း တိုးတက်မှု ရှိလာပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် လာမယ့်နေ့မှာ သူ ဘယ်လို အခြေအနေ ရှိသလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့် ရပါဦးမယ် ။ ”
ရှာကာ ရဲ့ဒဏ်ရာ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း အာတီတာ က ” သူ ကောင်းကောင်း တိုးတက်မှု ရှိနေပါတယ် ၊ နောက်ပီး ပြန်ကစားနိုင်ဖို့ သူ လုပ်ရမှာတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင် နေဆဲပါ ၊ သူလည်း ပိုပြီး သက်သောင့်သက်သာ ရှိလာပါတယ် ၊ တခြား သတင်းထူးတော့ မရှိသေးပါဘူး ။ ”
” ရှာကာ ရဲ့ဒဏ်ရာ အခြေအနေက အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်ပါတယ် ၊ သူ့ရဲ့တိုးတက်လာမှုက သိပ်ကောင်းနေတာကြောင့်ပါ ၊ သူ အသင်းနဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနေ နိုင်ပါပြီ ၊ သူ ပြန်ကစားနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းပေါ် ဦးတည် နေပြီ ဆိုရမှာပါ ။ ”
” ဒီတစ်ပတ်မှာ ရှာကာ က ကြံ့ခိုင်မှု နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် နောက်တစ်ဆင့်ကို စလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့အခြေအနေကို စမ်းစစ်ပြီး စကားပြောသွားမှာပါ ၊ ဘယ်အချိန်မှာ သူ့ကို ပွဲကစားခွင့် ပေးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးသွားမှာပါ ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို သတိရနေတာ အမှန်ပါပဲ ၊ သူက အသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တစ်ဦးပါ ၊ အသင်း အတွက် သိပ်ကို အဖိုးတန်တဲ့ စီနီယာ ကစားသမား တစ်ဦးပါ ၊ သူ သိပ်မကြာခင် ပြန်ကစားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article ဝက်စ်ဟမ်း ရခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီမှာ မန်ဒီနဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟို အနက် အပြစ် ဘယ်သူပိုရှိလဲ ဆိုတာ သုံးသပ်လိုက်တဲ့ ရီယို ဖာဒီနန်
Next Article နောက်ကျဂိုးနဲ့ ဂျိုတာကို အိုရီဂီ Save လုပ်ပေးခဲ့တဲ့..ဝုဖ် ဝ-၁ လီဗာပူး ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ